Colaadaha Burkino Faso oo Meel xun Gaaray iyo Milatariga oo magaaloyin cusub Qabsaday – Radio Daljir
Seteembar 22, 2015 5:27 b 0
Talaado, September 22, 2015 (Daljir) —Ciidamada Milatariga wadanka Burkina Faso ayaa gudaha u galay magaalada caasimadda ah ee Ouagadougou, kadib markii hogaamiyihii afgembiga sameeyey ee wadankaasi General Gilbert Diendere uu shaaciyey inuu xukunka kusoo celin doono xukuumaddii shicibku soo doorteen ee kumeel gaarka ahayd.
Saraakiisha hogaaminaysa ciidamda wadankaasi ee gaaray magaalada caasimadda ah ayaa waxa ay gelinkii dambe ee shalay iyo xalay kulamo layeesheen kooxdii Generalka ku wehelisey afgembiga uu sameeyey, si ay uga dhaadhiciyaan inay isdhiibaan.
Colonel Serge Alain taliye kuxigeenka ciidamada wadankaasi oo kusugan magaalada Ouedraogo ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in cutubyo katirsan ciidamada wadankaasi ay galeen magaalada caasimadda ah si ay hubkadhigid u sameeyaan.
” Waxaa waajib nagu ah inaan badbaadino dhammaan dadkii ka qaybgalay afgembiga iyadoo aan xabadi dhicin ama uusan dhiig ku daadan”, Ayuu yiri taliye kuxigeenka ciidamada Burkina Faso Colonel Serge Alain.
Ugu yaraan 10 ruux ayaa ku geeriyoodey 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen mudaharaadyo ay dhigiin kooxaha kasoo horjeeda dowladda kumeel gaarka ah ee dalkaasi, kadib markii madaxweynaha talada haya uu isku deyey inuu kororsado awooda dalkaasi oo uu xukumayey 27 sano.
DHAGAYSO:Barnaamijkii Saaka iyo Dunida Talaado_22